Wipe 2013 PRO Build 56 Full With Crack ~ လမင်းတရာ
Wipe 2013 PRO Build 56 Full With Crack
IN Cleaner, Software - ON 1:04 AM No comments
ကျွန်တော်တို့ဟာ ကွန်ပျူတာကို နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ပုံစံအမျိုမျိုး လုပ်ငန်း အမျိုးမျိုးနဲ့ အသုံးပြုနေကြပါတယ်
အဲဒီလို အသုံးပြုထားသမျှကို ကွန်ပျူတာက တစ်ခုမကျန် လိုက်ပြီး မှတ်သားထားပါတယ်ဒီလိုမှတ်သား
တဲ့နေရာမှာ History ဖိုင်တွေအဖြစ် မှတ်သားထားသလို Cookies ဖိုင်တွေအဖြစ်လည်းမှတ်သားပါတယ်
Temporary ဖိုင်တွေအဖြစ်လည်း မှတ်သားသလို အဆင်မပြေဖြစ်သွားတဲ့ဖိုင်ပုံစံတွေကိုလည်း Junk
ဖိုင်တွေအဖြစ်နဲ့ မှတ်သားပါတယ် User တွေအတွက် ပြန်လည် အသုံးပြုရာမှာ အဆင်ပြေအောင်သာ အခုလို မှတ်သားတဲ့စနစ်ကိုထည့်သွင်းထားတာ တကယ်တော့ ဒီလို မှတ်သားထားတဲ့ ဖိုင်တွေတော်တော်
များများဟာဝင်းဒိုးစနစ်ကို နှေးကွေးလေးလံစေတဲ့ ဖိုင်တွေသာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီလိုဖိုင်တွေကြာင့်ပဲကျွန်တော်
တို့ဟာ ကွန်ပျူကြီး လေးလံတာမျိုးကို ကြုံတွေဖူးသလို အင်တာနက်အသုံးပြုတဲ့အခါမှာလည်း Website အချို့ထဲ ၀င်မရတာတွေ Facebook ထဲ Log In ၀င်မရတာတွေ Char Box ရဲ့ ပုံစံတွေ ပြောင်းလဲနေ
တာမျိုးတွေကြုံရဖူးပါတယ်အဲဒီအခါ Ccleaner လို ဆော့ဝဲမျိုးကို Run ပေးလိုက်မှ ပြန်ပြီး အဆင်ပြေသွား
တတ်တာဟာဒီ Cookies ဖိုင်တွေရဲ့ ဆိုးကျိုးပါပဲအခု ကျွန်တော်တင်ပေးထားတဲ့ ဆော့ဝဲလေးကတော့ Ccleaner လို ဆော့ဝဲမျိုးကတောင်မရှင်းနိုင်လို့ ခပ်တည်တည်ချန်ထားခဲ့တဲ့ အမှိုက်ဖိုင်တွေကို ရှာဖွေ
ရှင်းလင်းပေးနိုင်ပါတယ်ဒါဆိုရင် ဒီဆော့ဝဲကို သွင်းထားပြီးရင် Ccleaner လိုဆော့ဝဲတွေ မလိုတော့
ဘူးလားလို့မေးစရာရှိပါတယ်လိုပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အခု ကျွန်တော်ပေးတဲ့ ဆော့ဝဲလေးက အမှိုက်ဖိုင်မှန်သမျှကိုသာထိထိရောက်ရောက် ရှာဖွေရှင်းလင်းပေးနိုင်တာပါ Ccleaner လိုတော့ Registry ပိုင်းကို ပြုပြင်ပေးတာ Disk Clean Up လုပ်ပေးတာမျိုးတွေကို မလုပ်ပေးနိုင်ပါဘူးဒီဆော့ဝဲ လေးရဲ့
အစွမ်းကိုသိချင်ရင်တော့ အရင်ဆုံး Ccleaner လို ရှင်းလင်းရေးဆော့ဝဲတစ်ခုကိုRun လိုက်ပါအမှိုက်ဖိုင်တွေ
မရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့ အချိန်ကျမှအခု ကျွန်တော်ပေးတဲ့ ဆော့ဝဲလေးကို Run လိုက်ပါ အမှိုက်ဖိုင်တွေ ရာချီပြီး ထုတ်ပြလာပါလိမ့်မယ် Full Version ဖြစ်အောင်Install ထည့်ပြီးတာနဲ့ ဒီကောင်လေးကို ပိတ်ပစ်လိုက်ပါ
ပြီးရင်တော့ Desktop က ဒီကောင်လေးရဲ့ Icon ပုံလေးပေါ်မှာ Right Click >> Properties >> Open Files Location နဲ့ ပေါ်လာတဲ့ ဒီကောင်လေးရဲ့ ဖိုင်တွေထဲကို Crack file ထဲကexe ဖိုင် ကို copy-paste နဲ့ ထည့် ၊လိုက်ပြီ ဆိုရင်တော့ ဒီကောင်လေးကိုဖူးသုံးလို့ရသွားပြီဖြစ်လို့အဆင့်ဆင့် နောက်ပြန် တခုစီပိတ်ပေး
လိုက်ပါ နောက်ဆုံးမှာ Apply >> OK ပေးလိုက်ရင် ဒီကောင်လေးကို ကောင်းစွာအသုံးပြုလို့ ရသွားပါပြီ..
လိုအပ်သူများ Download ရယူနိုင်ကြပါပြီ...
Download>>>dropbox (or) fileswap (or) uppit (or) solidfiles
Wipe 2013 which is able to clean up your computer from all sorts of rubbish, for example, you can remove all traces left by your host on the Internet, it is easy to find and clean index.dat files, cache, cookies, various logs, auto, etc. and so forth, I think to list the entire list is not necessarily so clear what is at stake.Note that this is what the developers write that no documents of users and the files just will not be affected, the application simply scans the system and finds all the tracks that you will be able to leave afteravisit to computers, so if you are experiencing in this moment, it is possible to use the Wipe.
Immediately after installing and launching the utility, you will need to chooseaRussian, or any other support, then the program will start scanning your computer, here will have to wait, most likely at the end of the process, you will see quiteabig list with all found tracks, you can immediately delete all or select certain moments.
Please note that the list will be divided into zones, you can view each of them separately, will be able to see the total number of files within the zones, how many entries in the registry will be affected, as well as be able to find the total number of occupied sites according to waste. Wipe the interface is quite simple and intuitive, I think will be able to figure out without problems, the program is nothing more to add, I hope will help you remove all traces of high quality.
Artisteer 4.2 RC v4.2.0 build 60559 full with patch/ kegen
Mirillis Action! 1.16.1.0 Full With Reg+Crack
Symantec System Recovery 2013 11.0.1.47662 + Recovery Disk full with serial
CrazyTalk Animator PRO 1.2.4 full with crack
Solid Converter v8.2 Build 4030.106 Full With Keygen
ArcSoft ShowBiz v5.0.1.480 Full With Serial
Edraw Soft Edraw Max 7.2.0.2455 Full With Patch
Kingston Format Utility v1.0.3.0 (USB Drives တွေ Format ချမရရင်)
Cleaners and Optimizer
Desktop and Themes
Files Copy Protecter
Internet Tools and Browser
Mobile phone ဆိုင်ရာ
Photo and Media Editor Tools
Speed Up Browser
Speed up window
USB Memory Increase
window 8 Activator
Uniblue SpeedUpMyPC 2013 5.3.9.0 Full With Key
PowerISO 5.7 Full With Keygen
Driver Reviver 4.0.1.60 (x86/x64) Full With Crack
Animated Wallpaper Maker 3.2.5 Full With Serial
ဘလော့မှာ Flash သီချင်းကို Video ဖိုင်လို တိုက်ရိုက...
ပုံတွေ စာလုံးတွေ အရိပ်ပေါ်အောင်လုပ်ကြမယ်
ဘလော့ရဲ့site feed လေးပြောင်းနည်း
ဘလော့ကာရဲ့ HTML ပုံစံ ပြောင်းလိုက်ပါပြီ (ဘလော့ကာ...
Dancer ပုံလေးတွေ ယူကြမယ်ဆိုရင်...
blogger များအတွက် Favicon Generator Sites များ
ဘလော့တခုမှ လိုခြင်သော ပုံ..ဒီဇိုင်း..တွေရဲ့ လင့်....
တင်ထားသမျှအားလုံး တနေရာထဲကနေ ရှာဖွေနိုင်တဲ့နည်းလ...
ဘလော့ကာတွေအတွက် လိုအပ်သော နေရာလေးတစ်ခု
Add Page Elements ကို Blog Header မှာထည့်ကြည့်ရအော...
ဘလော့အတွက် နောက်ခံ ကာလာ/ ပုံ တွေထည့်နည်း
ဘလော့ Template အသစ်ထည့်နည်း
Template ဒေါင်းယူပြီး xml ဖိုင်ရယူနည်း ( ဘလော့အတ...
Blog Template များ၏ width အား ချဲ့ခြင်း/ချုံ့ခြင်း...
Aurora 3D Presentation 13.07.02 (Build 07191520) ...
WonderFox DVD Video Converter 4.2 Full With Key
DriverPack Solution 13 R380 Final (DVD-ISO/x86/x64...
Easy Driver Pro 8.1.0.3 Full With Serial
Acebyte Utilities Pro 3.0.7 Full With Crack
PC Cleaner Pro 2013 11.6.13.7.15 Full With Serial
Windows7Manager v4.2.9 Full With Keygen
DLL-files Fixer 3.0.1. 2643 Full With Crack
idoo Video Editor Pro 2.2.0 Full With Serial
XYplorer 12.60.0000 Full With Keygen
Womble Easysub v2.0.0.108 Full With Serial
Winrar 5.00 Beta7Full Version
Photoinstrument 6.3 Build 638 Full With Key
Genuine Registry Doctor 2.6.3.8 Full With Crack
PhotoZoom Pro 5.1.0 for windows full with crack
PhotoLine Version 17.54 Full With Serial
7-Data Recovery Suite 2.1 Full with key
Password Depot v7.0.7 Full With Crack
Auslogics BoostSpeed v6.1.0.0 Full With Serial
Wise Care 365 Pro 2.65 Build 205 Final With Keygen...
3D.PageFlip.Standard.2.7.1 Full Version with seria...
Advanced SystemCare Ultimate 6.1.0.296 Full With ...
Internet Download Manager 6.17 Build2Full Versio...
Corel Products Collections Full With Activator
MicroSD Card Recovery Pro 2.9.9 Full With Serial K...
AnyDVD & AnyDVD HD 7.2.2.0 Full With Crack
Autorun Virus Remover 3.3 Build 0709 Full With Key...
Ashampoo Snap 6.0.6 Multilanguage
Teorex Inpaint 5.3 Multilingual
Loaris Trojan Remover 1.2.8.6 Full Crack
Joboshare DVD Creator 3.5.0 Build 0708 Multilingua...
Trojan Killer 2.1.7.4 Full with Patch
Photo Collage Max 2.2.1.6 Full With Patch
USB Virus Scan 2.43 Build 0706 Full + Serial
Pointstone System Cleaner 7.3.5.310 Full Version
save2pc Ultimate 5.3.3 Build 1447 Full Version
Picture Collage Maker Pro 3.4.0 Build 3626 Full Ve...
Mirillis Action! 1.14.1.0 Full Version
Any Video Converter Professional 5.0.7 Full Versio...
Platinum Hide IP v3.2.9.2 Full Patch
SpyHunter 4.14.5.4268 Full Patch
IDM Optimizer v.01 Freeware
PC Cleaner Pro 2013 11.6.13.7.3 Full With Serial
Uniblue SpeedUpMyPC 2013 5.3.8.5 Final Full with K...
Xilisoft YouTube Video Converter 3.5.2 Build 20130...
Xilisoft DVD Creator 7.1.3 Build 20130701 Final Wi...
Driver Magician 3.8 Full Keygen
BurnAware Professional 6.4 Final Full With Crack ...
EASEUS Partition Master 9.2.2 Professional Full W...
AnyToISO Converter Professional 3.5 Build 455 Full...
Total Uninstall Pro 6.3.0 Full Version
????Code ????? :
လမင်းတရာ | Powered by Blogger